Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha mashiinka maaskarada - Warshadda mashiinka maaskaro ee Shiinaha
Si buuxda otomaatig ah hal-mar hal mar adeegga servo mashiinka maaskaro
Mashiinka oo dhan waxaa lagu soo ururiyey qaab wax, sameynta, lug alxanka, alxanka laabanto iyo qaybo kale. Mashiinka otomaatigga ah wuxuu soo saari karaa oo keliya waji-gashiga wejiga la tuuri karo, laakiin ma ahan N95 iyo maaskarada rikoodhada. Hadday maaskaradu caafimaad tahay iyo in kale waxba kuma laha mashiinka. Ilaa iyo inta maaskarada la nadiifinaayo, maaskarada ay soo saartay qalabkan waxaa loo isticmaali karaa maaskaro qalliin.
Mashiinka maaskaro ee carruurta oo otomaatig ah
Maaskarada carruurta oo otomaatig ah oo buuxa oo ku jirta hal mashiin waa nooc cusub oo qalab ah oo loo sameeyay macaamiisha si ay u soo saaraan maaskaro kartoon Japanese ah. Waxay u isticmaashaa 1 ~ 4 lakab oo PP ah oo isku duuban dhar aan tolmo lahayn, kaarboon firfircoon iyo qalabka sifeynta sida qalabka quudinta. Maaskarada waxaa sameeya tikniyoolajiyadda ultrasonic. Maaskarku wuxuu leeyahay qaabeyn cad, alxamid xoog leh iyo xawaare dhakhso leh, kaas oo buuxiya shuruudaha wax soo saarka. Naqshadaynta maaskarada waxay si adag ula jaanqaadaysaa heerarka imtixaanka ee Yurub iyo Ameerika, waana hawlgal si otomaatig ah u shaqeeya. Mashiinka oo dhan wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeed, sameysmo, lugo alxamid ah, alxanka isku laaban iyo qaybo kale. Mashiinka maaskaro ee otomaatigga ah wuxuu soo saari karaa oo keliya waji daboolan oo la tuuri karo, laakiin ma ahan N95 iyo maaskarada rikoodhada.
Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, mashiinka maaskaro maaskaro qaabeysan oo si otomaatig ah ayaa si guul leh loogu soo saaray Shiinaha waxaana laga iibsaday suuqyo shisheeye, Mashiinka ayaa si otomaatig ah u shaqeynaya. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo, isku laabmo, la feero oo la gooyo maaskaro hal mar, Nidaamka wax soo saarka gaarka ah wuxuu hubiyaa khadadka nadiifka ah mana isbeddelayo wax soo saarka, taas oo si weyn u yareyn karta qashinka maaddada oo si wax ku ool ah u hubin karta tayada maaskaro la soo saaray
Mashiinka maaskaro Duckbill waa mashiin adeegsada ultrasonic mabda'a alxanka aan xuduud lahayn si loo soo saaro maaskaro qaabaysan oo duckbill ah oo ku habboon warshadaha wasakhda sare. Waxay leedahay heer sare oo otomaatiga ah. Waxay leedahay hal khad laga bilaabo quudinta iyo alaabada la dhammeeyay. Waxay leedahay quudinta tooska ah ee alaabta ceeriin ah, nidaamka gudbinta laydka sanka oo madaxbanaan, waxayna ku duubmi kartaa khadka sanka ee maro aan tolmo lahayn si toos ah, isku laabaya oo si toos ah u gooya alaabada la dhammeeyay, Badeecada ay soo saartay mashiinka maaskaro afku shinbirtu waxay leedahay muuqaal qurux badan, waxqabad xasiloon, dhalidda sare, heerka cilladaha hooseeya iyo hawlgalka fudud.
Mashiinka maaskarada balanbaalis
Mashiinka maaskaro sawir-gacmeedka balanbaalista ah ee iswada waa nooc cusub oo qalab loo soo saaray si loo daboolo baahida macaamiisha; 2 ~ 6 lakab oo ah qalab aan kala go 'lahayn oo ka sameysan PP, kaarboon firfircoon iyo qalabka sifeynta ayaa loo isticmaalaa sida qalabka quudinta (iyadoo loo eegayo saameynta shaandhaynta alaabta ceeriin, N95, FFP2 iyo heerar kale ayaa lagu gaari karaa)
Nooca Koobka, Nooca Koobka Mashiinka Maaskaro Semi-oomaatikada ah, Mashiinka maaskaro nuuca nambarka nus-tooska ah
Sameynta saxaafadda kulul - nooca koob maaskaro maaddada mashiinka sameynta saxaafadda kulul, ee adeegsata mabda'a cadaadinta kulul si loo dhammaystiro maaskaro u eg koob-sameynta. Waxaa jira lix boos oo shaqo oo hal mashiin ah, labo qofna hal mar ayey shaqeeyaan.
Soo saaraha Mashiinka maaskarada faashadda
Mashiinka maaskarada faashaddu waa qalab alxamid wax ku ool ah oo hufan loogu talagalay maaskarada diyaaradda. Waxaa badanaa loo isticmaalaa isku xidhka alxanka maaskaro diyaarad aan tolmo wanaagsan lahayn. Waxay ka dhejin kartaa faashadda noocyada kala duwan ee maaskaro diyaaradda. Waxaa badanaa lagu dabaqi karaa alxanka isku xidha ee 2-lakabka maaskaro diyaarad dhar aan-tolmo lahayn, 3-lakabka maaskaro diyaarad dhar-xidhka leh, maaskaro diyaarad caafimaad, 4-lakabka firfircoon maaskaro diyaarad carbon iyo maaskaro diyaarad anti-virus.
Mid Ka Mid ah Jiidka Mashiinka Maaskaro, Soo-saaraha Maaskaro, Baakadaha Xumbada Baakadaha, Maqaarka Xumbada Xakamaynta, Mashiinka Maaskaro Wejiga, Dharka Xumbada Cas,